Mayelana NATHI - Chen Guang Biotechnology Group Co., Ltd.
Umklomelo Wezesayensi Nobuchwepheshe
Uhlelo kanye Nezitifiketi
I-Chen Guang Biotechnology Group Co., Ltd.yibhizinisi lobuchwepheshe obuphezulu eligxile ekutholeni izithako ezisebenzayo ezitshalweni zemvelo, ikakhulukazi sithuthukisa futhi sikhiqize izigaba ezinkulu ezi-4 kufaka phakathi imikhiqizo engaphezu kwengu-80.
Col Imibala Yemvelo
Extr Izicucu zezinongo namafutha abalulekile
Ext Okukhishwa Kwezokudla Nezemithi
Imikhiqizo yethu isetshenziswa kakhulu kwezokudla, izimonyo, ukubhaka, iziphuzo, ukunakekelwa kwezempilo kanye nezimboni zokuphakelayo.
Izimakethe zethu eziyinhloko yiYurophu, iMelika, i-Australia neChina, iRussia, iJapane, iKorea namanye amazwe ase-Asia nase-Afrika.
Ibhizinisi likazwelonke elihola phambili kwezimboni zezolimo
Kuboniswe Ibhizinisi Lompetha Wokwakha Embonini Eyodwa
Ibhizinisi Likazwelonke Eliphezulu
Ibhizinisi Likazwelonke Ledemo Yezobuchwepheshe
Ibhizinisi Likazwelonke Lesikweletu
Ibhizinisi Ledemo Lokulima Umkhiqizo Wezimboni Likazwelonke
Ibhentshimakhi Lokusebenza Lezimpahla Eziyinkimbinkimbi Zebhizinisi Likazwelonke
Isikhungo Sezobuchwepheshe Sikazwelonke
Isiteshi Sokucwaninga Kwangemva Kokwenza
IChilli Processing Key Laboratory yoMnyango Wezolimo
Ilebhu Yobunjiniyela Kazwelonke Nasendaweni
Isikhungo sokusebenzela se-Academician
Isikhungo Sokucwaninga Sesifundazwe Sezobunjiniyela
Ubuchwepheshe obukhulukazi kanye nokwenziwa kwezimboni kokukhishwa nokuhlukaniswa kwemikhiqizo yemvelo yeChilli
uthole umklomelo wesibili weNational Science and Technology Award ngo-2014
I-Key Technology Innovation kanye Nokusetshenziswa Kwezimboni Zokucubungula Utamatisi
Kutholwe umklomelo wesibili we-National Science and Technology Award ngo-2017
Inqubo yokukhiqiza kanye nocwaningo lwezinto zokusebenza kanye nentuthuko kanye nokwenza izimboni kwe-paprika oleoresin ne-capsicum oleoresin
wawina umklomelo wokuqala weSayensi neThekhnoloji Wenqubekela phambili owawuqhamuka eChina National Light Industry Council ngo-2011.
Ukuthuthukiswa kobuchwepheshe obukhulu nokusetshenziswa kokukhiqizwa kwemvelo kwe-lycopene
iwine umklomelo wokuqala weChina umkhakha wezimboni wezinto ezisungulwe ngo-2012.
Ubuchwepheshe obukhulukazi emisha kanye nasezimbonini ekusetshenzisweni okuphelele kwekotoni
wawina umklomelo wokuqala wenqubekela phambili yesayensi nezobuchwepheshe esifundazweni sase-Hebei ngo-2013
Ukulawulwa kwekhwalithi yeCapsicum Deep yokucwaninga kwezobuchwepheshe nezimboni
uzuze umklomelo okhethekile wenqubekela phambili yesayensi kanye nezobuchwepheshe kazwelonke ngonyaka wezi-2013
Umklomelo Wokuqala Wokuphumelela Kwezokuphathwa Kwamabhizinisi Kazwelonke Okwenziwayo ngo-2012
Umklomelo wekhwalithi kaHulumeni wesiFundazwe ka-Hebei ngo-2013
I-CCGB iqinisekiswe yi-BRC, cGMP, National Laboratory (CNAS), ISO9001, ISO22000, ISO14001, OHSAS18001, KOSHER, HALAL, FAMI-QS, CMS, SEDEX, FDA registration of USA and intellectual management management certification.
Imikhiqizo yethu, ihlangabezana nesicelo se-FAO ne-WHO, nangemva kwemizamo engaphezu kweminyaka eyishumi, iChenGuang ngokuthembela emandleni ayo ithuthukise isimo sombala waseChina emhlabeni, okwenza iChina yaba umholi womhlaba wonke ekukhiqizeni i-paprika oleoresin. Kusuka kulutho kuya ezingeni eliphakeme lamazwe aphesheya, uChenguang uhlala eqhubeka nokwenza ngcono.
I-CCGB inamathisela ukubaluleka kumuntu onekhono. Njengamanje, i-ChenGuang Biotech manje inezingcweti ezingaphezu kwezingu-100 ezisezingeni eliphakeme, kufaka phakathi Ochwepheshe abaneSibonelelo Esikhethekile soMkhandlu Wombuso, Ochwepheshe Beprojekthi Yamakhulu Amakhulu / Izinkulungwane / Amakhulu Amakhulu Amathalenta, Izazi Eziphezulu Zezinhlelo Zesifundazwe 3/3/3 Programme, Young Professionals, abantu abaneziqu ze-PhD noma ze-Master, nabanye ochwepheshe bezobuchwepheshe. Phakathi kwabo bonke abasebenzi, inani le-undergraduate noma ngaphezulu lisebenza ngaphezu kuka-44%.
Umbono wokuthuthuka weCCGB: yakha isizinda semvelo sezimboni futhi unikele empilweni yabantu!
Ikhwalithi enhle kakhulu, ukuhola kwemvelo! Inkampani izimisele ukuthatha amandla abo bonke abasebenzi, ngemisha yethu, iqambe izindatshana ezintsha zokwenza iminikelo emikhulu ekuthuthukiseni umnotho wezenhlalo kanye nempilo yabantu!
Bukela ividiyo ukuze ufunde kabanzi ngathi
I-CCGB Core Value
Abaninimasheya, amakhasimende, abahlinzeki nabalingani, abasebenzi kanye nomphakathi bonke bayazuza ekuthuthukisweni kwenkampani futhi bakhulise izinzuzo eziningi. Ngasikhathi sinye, sizohambisana nezikhathi futhi sifeze ukuwina-win ukubambisana.
I-Ccgb & Abasebenzi
I-Ccgb & Amakhasimende / Ozakwethu
I-Ccgb & Nenhlangano
Le nkampani ihlobene kakhulu nezintshisekelo ezibalulekile zesisebenzi ngasinye. Abasebenzi basebenza ngenkuthalo hhayi kuphela ekuthuthukiseni inkampani, kodwa futhi nekusasa labo. Inkampani iyabahlonipha abasebenzi, ivikela amalungelo nezintshisekelo zabasebenzi, futhi yakha ipulatifomu elungele ukuzithuthukisa komsebenzi ngamunye. Inqubo yenqubekela phambili yebhizinisi nayo inqubo yokuthuthukiswa kwabasebenzi!
Ngenkathi isathuthuka, i-CCGB ilwela ukwenza kahle futhi ihlinzeka amakhasimende / ophathina ngokuqhubekayo ngemikhiqizo eyeqa ikhwalithi. Ngenxa yamakhasimende / ophathina, i-CCGB inamathela ekubambisaneni kokuwina futhi izuze ukuthuthuka okuvamile naphakade.
Ngomsebenzi othi "One Belt One Road"
I-CCGB iphendula ngenkuthalo ezinhlelweni zikazwelonke futhi isebenzisa isu le- “Agriculture Going Global”;
Amafemu asungulwe eNdiya naseZambia ukuthuthukisa izisekelo zokutshala;
Ukukhuthaza ngenkuthalo ukushintshana kwezomnotho, kwamasiko nobuchwepheshe kanye nokubambisana;
Ukuncishiswa Kwendlala Yezimboni kanye Nokuvuselelwa Kwezindawo Zasemakhaya
Njengebhizinisi eliyinhloko elihamba phambili kuzimboni zezolimo, i-CCGB ibamba iqhaza ekuboniseni;
Esifundazweni iXinjiang naseHebei, iCCGB ithuthukisa isizinda sezitshalo, ilungisa isakhiwo sezolimo sendawo, futhi inyuse imali engenayo yabalimi;
I-CCGB iqhuba abalimi abangama-300,000 ukuthi bandise imali yabo nge-yuan ecishe ibe yi-2 billion unyaka nonyaka;
I-CCGB igxile kakhulu ekuthuthukiseni imfundo;
Sisungule i- "Chenguang Scholarship" futhi sakha isisekelo sokufundisa ukuxhasa abafundi abahlwempu;
Eminyakeni edlule, iminikelo yethu kwezemfundo ifinyelele ngaphezu kwesigidi esisodwa se-RMB.
Ukuvikelwa Kwemvelo & Nomnotho Oyisiyingi
I-CCGB ikhathazeke kakhulu ngokusetshenziswa okuphelele kokuvikelwa kwemvelo nezinsizakusebenza;
I-CCGB inamathela emnothweni oyindilinga, isebenzisa zonke izingxenye zesitshalo ukwenza ukukhishwa kwemvelo.
Ngokusebenzisa umqondo omusha kanye nobuchwepheshe obusha, siye sabona izindleko "zero" zokukhiqizwa kwe-lycopene nembewu yamagilebhisi;
Yakha isisekelo semvelo esikhishwe emhlabeni, Nikela empilweni yomuntu!
Ukukhishwa kwemikhiqizo yemvelo, ngokuphepha kwayo, ukuba luhlaza kanye nempilo, sekuyimboni ethembisayo yokuphuma kwelanga.
Isisekelo sezinto eziluhlaza ezinhle, imvelo yentuthuko ephakeme, izinzuzo ezinkulu zokukhiqiza eziphansi kanye nocwaningo oluphakeme nentuthuko, amandla wokulawula ikhwalithi ayisisekelo esiqinile sokuthuthukiswa kweCCGB.
Impumelelo ye-paprika oleoresin kumane kuyisiqalo senkampani yethu. Ukuze sizivumelanise nomqondo omusha wokuphila: ukubuyela emvelweni nokunaka ukondleka nempilo, sichaze indlela yethu yokuthuthuka - sisebenzisa i-biotechnology ukungena embonini yezempilo futhi sizibophezele ekunikeleni empilweni yabantu.
"Izinyathelo Ezintathu" ezikhulayo
Imboni Yezempilo Enkulu
Ngokuthuthuka kwesikhathi esizayo, njengamanje sisebenzela ukuthunyelwa kwezinsizakusebenza ze-3'rd Isinyathelo somzila wethu: Isinyathelo esingu-1'st, imibala yemvelo; Isinyathelo sesi-2, wandisela ezinye izithako ezisebenzayo zesitshalo; futhi ngokususelwa kulezo zinzuzo, isinyathelo se-3'rd semikhiqizo yokudla okunempilo kanye nokukhiqizwa kwemithi yamakhambi yamaShayina, okungena embonini enkulu yezempilo.
Ngokwesisekelo sezinto ezisezingeni eliphakeme zokukhishwa kwemikhiqizo yemvelo, i-CCGB inweba izinga lezimboni futhi ihlanganisa ukusebenza kahle kokukhishwa kwezitshalo ukuthuthukisa imikhiqizo yokunakekelwa kwempilo; Sihlanganisa ngempumelelo ubuchwepheshe bokukhipha izitshalo kanye nethiyori yendabuko yamaShayina ukwenza sesimanje isizinda semithi yamaShayina nokwakha imikhiqizo yokunakekelwa kwezempilo enomthelela omkhulu, isizinda somkhakha wemithi. Siyazibophezela ekwenzeni imikhiqizo yokunakekelwa kwempilo, imithi abantu abangakwazi ukuyithenga.
Okubalulekile Kwemvelo Kwezempilo Yomuntu
Sihlala sisebenzisa isayensi nobuchwepheshe obuthuthukile ukukhipha izinto ezisebenzayo nemikhiqizo evela kwimikhiqizo yemvelo, futhi silethe ukuphepha okwengeziwe empilweni yomuntu.
Sizibophezele ekwenzeni ngcono ikhwalithi yemvelo yokudla kwethu nokuhlangabezana nezidingo zempilo yabantu. Siyethemba ukuvikela impilo yabantu ngensizakalo eqotho nemikhiqizo esezingeni eliphakeme, ukwenza impilo ibe mibala futhi ibe nenjabulo.
★Thembeka futhi uthembeke, Zikhandle
★Ukukhuthala nokuqamba izinto ezintsha
★Ukuzinikela, Ubuqotho nokuzikhuza